TRONSMART WCP05 33W Universal Travel Adapter, PD 3.0&QC 3.0 QuickCharg – Remax Online Shop
Order Process များပိုမိုမြန်ဆန်အောင် ယခုပါဖုန်းနံပတ်များကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါပြီ...09 887 887 504 / 09 887 887 506 / 09 887 887 509
iPhone 13 Cover & Case
Dockes & Stands
TWS Earbuds (Gaming)
Data & Hub ( Type-C & USB )
Network Swiches & Lan Cable
HDMI & VGA Cable
iPhone 11 Series Cover 70% Off
iPhone 12 Series Cover 50% Off
All categories All categoriesAir Purifier FiltersAmazfitAudio AccessoriesBagBaseusBluetooth EarphoneBluetooth Earphone & Car ChargerBluetooth HeadphoneBluetooth ReceiverBluetooth SpeakercabCableCable ManagementCABLE MANAGEMENT SLEEVECablesCar AccessoriesCar CameraCar ChargerCard ReaderCaseschargerCharger Setcharging cableCoverCupEarphoneExtensionFanFood Mixer & Blender Accessoriesgadget maxGaming CableGaming EarbudsHeadphoneHolders & StandsHome Theater SystemsHookHubHumidifierLampsLaptop StandLuggageMagnetic Phone HolderMobile Phone CasesMosquito TrapOTG iOS Adaptor ConverterOTG Micro USB AdaptorOTG Type C AdaptorPD CHARGERPower BankPower Outlets & SocketsQC 3.0 ChargerRemaxRemote ControlRockSD CardSelfie Stick & TripodSmartwatchSpeakerSpeakersStorage & Data Transfer CablesTablet StandTempered glassTravel ChargerTripod SpreadersTWS EarbudsType C CableUGREENUngreenUV sterilizerWire EarphoneWired EarphoneWireless ChargerWireless Power Bank
TRONSMART WCP05 33W Universal Travel ...
TRONSMART WCP05 33W Universal Travel Adapter, PD 3.0&QC 3.0 QuickCharge, USB-C PD 3.0 quick charge
Specifically designed for travelers covering more than 150+ countries.
Supports fast charge for all USB devices.
Certified Safety Standards
Inbuilt 8A overload fuse and safety shutters for higher safety standards.
1. Use: Select the desired prong, push its slider until locked.
2. Close: Press the unlock button and push the slider completely back to its starting position.
- iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/Xs/Xs Max/XR/X/8/8 Plus/7/7 Plus/SE/6s Plus/6s/6 Plus/6/5s/5c/5
- iPad Pro 12.9-inch/11-inch/10.5-inch, iPad Air/mini full series
- Samsung Galaxy S10/S10+S9/S9+/S8/S8+/S7 Edge/S6 Edge+/Note 10/9/8/A9
- Huawei P20 Pro/P20/P10/P9/P8/Mate 10 Pro/10/9/8/ Nexus 6P/nova
- Google Pixel 3/3 XL/2/XL, Google Pixel, Google Nexus 6P/5X
- LG G5/G6/G7/V20/V30/Nexus 5X
- MacBook Air 13-inch/MacBook Pro 13-inch/MacBook 12-inch/Dell XPS 13/15
- HP Spectre 13.3-inch/Google Chromebook Pixel/Xiaomi Air/Pro
- Xiaomi, Meizu, tablets, digital cameras and more
1. AC socket does not convert voltage. Make sure your AC powered devices as following supports worldwide 110-230V for use in overseas.
2. AC socket provides up to 880W of power at AC 110V and 1840W at AC 230V.
3. The USB-C port does not support charging laptops or Nintendo Switch, so please charge them via AC outlet withaproper USB charger.
4. Fast charging supported for iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, iPhone Xs / Xs Max/ XR, iPhone X / 8 / 8 Plus when used with the original Apple USB-C to Lightning cable.
JCB Mastercard PayMe Visa
ကျွန်ုပ်တို့ Remax Online Shop .com မှဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းအော်ဒါအချက်အလက်များကို စစ်ဆေးပြီးသည်နှင့် အော်ဒါမှာယူသော
Customer တစ်ဦးချင်းဆီသို့ Email ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ပြီးထပ်မံအတည်ပြုပေးပါမည်။ထိုသို့ ငွေပေးချေပြီး
အော်ဒါအတည်ပြုပြီးပါက မှာယူသည့်နေ့မှစပြီးနောက် ၂ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း သတ်မှတ်ထားသော မြို့ကြီးများနှင့်နယ်မြို့များသို့
ပို့ဆောင်ခ နှုန်းထားအတိုင်း အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
အော်ဒါမှယူသည့် မည်သည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုမဆို ပစ္စည်းလက်ခံရပြီးမှသာ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။ပစ္စည်းလာပို့သူနှင့် တစ်ပါတည်း
ထည့်ပေးလိုက်မည့် ယင်းပစ္စည်းနှင့် ငွေရှင်းဘောက်ချာကို Customer များဘက်မှ သေချာစစ်ဆေးပြီးမှ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
သယ်ယူရန် ခက်ခဲပြီးအလွန်ကြီးမားသော ပစ္စည်းများကို အော်ဒါမှာယူပါက သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်မှ ကြိုတင်ငွေရှင်းပေးထားရပါမည်။
လူကြီးမင်းမှာယူသောပစ္စည်းမှာ အခြားသူထံသို့ ပေးပို့ရန်ဖြစ်ပါက ပစ္စည်းတန်ဖိုးကျသင့်ငွေနှင့် ပို့ဆောင်ခကို Remax Online Shop သို့ဘဏ်မှဖြစ်စေ ငွေကြိုရှင်းထားရပါမည်။
ပစ္စည်းပို့ဆောင်ပေးခြင်းအတွက် ကျွနု်ပ်တို့ Remax Online Shop မှ သတ်မှတ်ထားသော မြို့ကြီးများသို့ Fast & Free Delivery ဖြင့် အချိန်တိကျစွာ
ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်မှအပ အခြားမြို့နယ်များသို့ပို့ဆောင်ပေးရမည်ဆိုပါက Delivery Fees ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
နယ်ကားဂိတ်(Express) ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးရသော မြို့များကို သက်ဆိုင်ရာ ကားဂိတ်များမှ တဆင့်ပေးပို့ပေးပါသည်။
ကားဂိတ်မှ တဆင့်ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် ငွေပေးချေမှုစနစ်မှာ Payment Methods တွင်သက်ဆိုင်ရာ Bank Deposit ဖြင့်ရွေးချယ်၍ ငွေပေးချေရမည်ဖြစ်ပါသည်။သက်ဆိုင်ရာ ကားဂိတ်များသို့ ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရာ၌ လူကြီးမင်းတို့ဘက်က တန်ဆာခငွေပေးချေမှုများတွင် ပိုငွေနှင့်လိုငွေများကို ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်၍ ညှိုနှိုင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ငွေဝင်ပြီး ၂ရက်မှ ၃ရက်အတွင်း မှာယူသည့်ပစ္စည်းကို သက်ဆိုင်ရာကားဂိတ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Remax Online Shop.com မှထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချပေးရာတွင် ရောင်းချပေးသောကုမ္ပဏီများနှင့် Remax Online Shop တို့ကြား
အာမခံချက်များ အပြည့်အဝရရှိထားလို့ စိတ်ချယုံကြည်စွာ ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် အာမခံချက် အပြည့်အဝပေးထားပါသည်။
ဘယ်လို ကုန်ပစ္စည်းမျိုးကို ပြန်လဲပေးနိုင်မှာလဲ ?
Remax Online Shop.com မှ မှာယူလိုက်သော ပစ္စည်းများကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ
မှာယူထားပြီးပစ္စည်းများ အနာအဆာပါရှိလာခြင်းတို့ဖြစ်ပါက ထိုပစ္စည်း၏မူလထုတ်ပိုးမှု ပုံစံမပျက် Remax Online Shop သို့ပေးပို့ပြီး ကျသင့်သည့်
တန်ဆာခကို လူကြီးမင်းတို့ထံမှ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်နှစ်ရက်အတွင်း လဲလို့ရတာလဲ ?
Return ပြန်ပြီးပစ္စည်းများကို Remax Online Shop.com မှလက်ခံရရှိပြီး ၂ ရက်အတွင်း ပြန်လည်ပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လို ပြန်လဲရမလဲ ?
လူကြီးမင်း၏ အော်ဒါနံပါတ်, ပြန်လည်ပေးပို့လိုသော ပစ္စည်း, ပြန်ပို့လိုသော အကြောင်းအရင်းအပြည့်အစုံကို
Remax Online Shop ရဲ့ Customer Service Phone : (+95)9446644509(သို့) mzmyanmar1987@gmail.com သို့ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည် ။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှ ဖြစ်လျှင် ပစ္စည်းလာပြန်ယူပေးမည်ဖြစ်ပြီး အခြားနယ်များမှဖြစ်ပါက Customer Service မှ မည်သို့ပေးပို့ရမည်ကို လမ်းညွှန်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည် ။
ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပစ္စည်းပြန်လည်ရောက်ရှိပါက သင်ပြန်လည်ပေးပို့ရခြင်း အကြောင်းအရင်းနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိစစ်ဆေးပြီး ကိုက်ညီမှုရှိခဲ့လျှင် လူကြီးမင်းတို့၏
ပစ္စည်းအမှန်နှင့် ပြန်လဲပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးပါမည်။ကိုက်ညီမှုမရှိပါက သင့်အားအကြောင်းကြားပြီးပြန်လည်ပို့ဆောင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၃ ရက်ကျော်သွားပြီးမှ ပျက်နေမှန်းသိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?
ပစ္စည်းလက်ခံရရှိချိန်မှစပြီး ၃ ရက်ကျော်လွန်သွားပါက ပြန်လည်ပေးပို့၍ မရနိုင်ပါ။သို့သော် ကုန်ပစ္စည်းမှာ နဂို ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်နေပါက ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့ Customer Service Phone : (+95)9446644509 (သို့) mzmyanmar1987@gmail.com သို့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
To startareturn, you can contact us at mzmyanmar1987@gmail.com. If your return is accepted, we’ll send youareturn shipping label, as well as instructions on how and where to send your package. Items sent back to us without first requestingareturn will not be accepted.
You can always contact us for any return question at mzmyanmar1987@gmail.com.
Remax Head Office
Yangon Brand Shops
Mandalay Brand Shops
Remax Online Shop App
Remax Reward App
2022 / MAXIMIZE MYANMAR Co.,Ltd